5 Nanso, ɔbarima bi a ne din de Anania, ne ne yere Safira nso tɔn agyapade bi, 2 na oyii nea wonyae no bi siei, a ne yere nso nim ho asɛm, na ɔde ne fã bi pɛ beguu asomafo no nan ase.+ 3 Na Petro kae sɛ: “Anania, dɛn nti na Satan+ apirim wo koma sɛ bedi atoro+ kyerɛ honhom kronkron+ na yi nea wunyae wɔ asase no ho no bi sie? 4 Bere dodow a na ɛwɔ wo nsam no, na ɛnyɛ wo dea anaa, na wotɔnee no, na ɛnna so nyɛ wo dea? Dɛn nti na wobɔɔ pɔw a ɛte saa wo komam? Onyankopɔn na woadi atoro+ akyerɛ no, na ɛnyɛ nnipa.”+ 5 Anania tee asɛm yi no ɔhwee ase wui.+ Na ehu+ kɛse kaa wɔn a wɔtee ho asɛm no nyinaa. 6 Na mmerante no sɔre de ntama kyekyeree+ no, na wɔsoaa no fii adi kosiee no. 7 Afei bɛyɛ nnɔnhwerew abiɛsa akyi no, ne yere bae a na onnim nea asi. 8 Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Ka kyerɛ me, so mo baanu tɔn asase no de gyee saa?” Ɔkae sɛ: “Yiw, yɛde gyee saa.” 9 Ɛnna Petro ka kyerɛɛ no sɛ: “Dɛn nti na mo baanu ayɛ adwene sɛ mobɛsɔ Yehowa honhom ahwɛ?+ Hwɛ! Wɔn a wokosiee wo kunu no anammɔn na ɛwɔ ɔpon ano no, na wɔbɛsoa wo akɔ.” 10 Amonom hɔ ara ɔhwee ne nan ase wui.+ Bere a mmerante no bae no, wohui sɛ wawu, na wɔsoaa no fii adi kosiee no, ne kunu nkyɛn. 11 Ɛnna ehu kɛse kaa asafo mũ no ne wɔn a wɔtee nsɛm yi nyinaa. 12 Bio nso, wɔnam asomafo no so yɛɛ nsɛnkyerɛnne ne anwonwade afoforo bebree wɔ nnipa no mu,+ na na wɔn nyinaa de koma koro wɔ Solomon abrannaa+ no so. 13 Nokwarem no, nnipa a aka no mu biara annya akokoduru amfa ne ho ammɔ wɔn;+ nanso, nkurɔfo kamfoo wɔn.+ 14 Nea ɛsen saa no, wɔn a wɔagye Awurade adi no kɔɔ so bɛkaa wɔn ho, mmarima ne mmea pii,+ 15 na mpo wɔde ayarefo baa abɔnten bɛtotoo mpa ne kɛtɛ so, sɛnea ɛbɛyɛ a sɛ Petro retwam a, anyɛ yiye koraa no ne sunsuma bɛtɔ wɔn mu bi so.+ 16 Afei, nnipa pii fi nkurow a atwa Yerusalem ho ahyia no mu bae, a wɔsõsõ ayarefo ne wɔn a ahonhom fĩ haw wɔn, na wɔsaa wɔn nyinaa yare. 17 Na ɔsɔfo panyin no ne wɔn a wɔka ne ho nyinaa, Sadukifo fekuw a na wɔwɔ hɔ saa bere no sɔree, na ahoɔyaw a ahyɛ wɔn mã+ nti, 18 wɔkyeree asomafo no de wɔn guu afiase.+ 19 Na anadwo no, Yehowa bɔfo+ buee afiase apon+ no de wɔn fii adi kae sɛ: 20 “Munsi kwan so nkɔ, na munkogyina asɔrefie hɔ, nkɔ so nka nkwa+ yi ho nsɛm nyinaa nkyerɛ nkurɔfo no.” 21 Wɔtee eyi no, wɔkɔɔ asɔrefie hɔ ahemadakye na wofii ase kyerɛkyerɛe. Na ɔsɔfo panyin no ne wɔn a wɔka ne ho no bedui no, wɔfrɛɛ Sanhedrin no ne Israel mma mpanyimfo bagua nyinaa behyiae,+ na wɔsoma kɔɔ afiase hɔ sɛ wɔnkɔfa wɔn mmra. 22 Nanso bere a awɛmfo no duu hɔ no, wɔanhu wɔn wɔ afiase hɔ. Enti wɔsan kɔbɔɔ amanneɛ, 23 kae sɛ: “Yehui sɛ wɔatoto afiase no nyinaa mu denneennen a awɛmfo no gyinagyina apon ano, nanso yebuei no yɛanhu obiara wom.” 24 Bere a asɔrefie hwɛfo ne asɔfo mpanyin no tee nsɛm yi no, wɔn adwene tu frae a wonnim nea nsɛm yi bɛkɔ akowie.+ 25 Afei ɔbarima bi bɛbɔɔ wɔn amanneɛ sɛ: “Hwɛ! Mmarima a mode wɔn guu afiase no wɔ asɔrefie hɔ, na wogyinagyina hɔ rekyerɛkyerɛ nkurɔfo no.”+ 26 Enti ɔhwɛfo no ne n’awɛmfo kɔfaa wɔn bae, nanso wɔanyɛ wɔn basabasa, efisɛ na wosuro+ sɛ nkurɔfo no besiw wɔn abo. 27 Enti wɔde wɔn begyinaa Sanhedrin no asa so. Na ɔsɔfo panyin no bisabisaa wɔn nsɛm 28 na ɔkae sɛ: “Yɛhyɛɛ+ mo denneennen sɛ monnkyerɛkyerɛ edin yi mu bio, nanso, hwɛ! mode mo nkyerɛkyerɛ ahyɛ Yerusalem mã,+ na moabɔ mo tirim sɛ mode onipa yi mogya+ bɛba yɛn so.” 29 Petro ne asomafo a wɔaka no buae sɛ: “Ɛsɛ sɛ yetie Onyankopɔn sɛ sodifo mmom sen nnipa.+ 30 Yɛn agyanom Nyankopɔn nyan+ Yesu a mosɛn no dua so,+ na mukum no no. 31 Oyi na Onyankopɔn maa no so sɛ Ɔsafohene+ ne Agyenkwa+ kɔɔ ne nsa nifa so,+ sɛ ɔmma Israel nnya adwensakra+ ne bɔne fafiri.+ 32 Na yɛyɛ nsɛm yi ho adansefo,+ na honhom kronkron+ a Onyankopɔn de ama wɔn a wotie no no nso adi adanse.” 33 Bere a wɔtee eyi no, ɛwowɔɔ wɔn yiye na wɔpɛe sɛ wokum wɔn.+ 34 Nanso Farisini bi a wɔfrɛ no Gamaliel+ sɔree Sanhedrin no mu, mmarakyerɛfo a nkurɔfo no nyinaa bu no, na ɔhyɛe sɛ wɔmfa mmarima no mfi adi kakra.+ 35 Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Israel mmarima,+ monhwɛ mo ho yiye wɔ nea moayɛ mo adwene sɛ mobɛyɛ nnipa yi ho. 36 Hwɛ, bere bi a atwam no, Teuda sɔre kae sɛ ɔyɛ obi,+ na mmarima a wɔn dodow bɛyɛ ahanan kɔkaa ne kuw no ho.+ Nanso wokum no, na wɔn a wotiee no nyinaa bɔ hwetee na ansi wɔn yiye. 37 Ɔno akyi no, Galileani a ɔde Yuda nso sɔree nna a wɔrekyerɛw din+ no mu, na ɔtwee nnipa dii n’akyi. Nanso saa ɔbarima no wui, na wɔn a wotiee no no nyinaa bɔ hwetee. 38 Enti, mise mo wɔ nea ɛrekɔ so seesei yi ho sɛ, mommfa mo ho nnhyehyɛ wɔn nsɛm mu, na munnyaa wɔn; (efisɛ, sɛ agyina anaa adwuma yi fi nnipa a ebegu;+ 39 nanso sɛ efi Onyankopɔn+ a, muntumi ntu wɔn ngu;)+ anyɛ saa a, ɛbɛyɛ sɛ nea mo ne Onyankopɔn ankasa na ɛreko.”+ 40 Ɔkaa eyi no wotiee no, na wɔfrɛɛ asomafo no hwee wɔn+ hyɛɛ wɔn sɛ wonnyae Yesu din no ho asɛm ka,+ na wogyaa wɔn. 41 Ɛnna eyinom de anigye+ fii Sanhedrin no anim kɔe, efisɛ wɔabu wɔn sɛ ne din nti wɔfata sɛ wogu wɔn anim ase.+ 42 Na wɔkɔɔ so kyerɛkyerɛe kaa Kristo Yesu ho asɛmpa+ wɔ asɔrefie ne afie afie+ daa a wɔannyae.+